Efere abrasive ọka
Glassfibre akwado efere
Ndenye Change bọtịnụ
Spindles maka Flap Wheels
Vitrified egweri Wheels
N'elu-egweri na Cylindrical egweri
Bevel Gear egweri
Gear Ụdị egweri
Ngwá Ọrụ egweri
Resin-bonded egweri Wheels & Bee-apụ Wheels
Kpọchie-elu ogologo egweri wiil
Hypodermic agịga egweri
Dara mbà n'obi Center egweri Wheels
Mesikwuru Bee-apụ Wheels
Large Cut-apụ Wheels
Nkenke ọnwụ wiil
Ndenye Change Discs
Abrasive Ogbo Block
Velcro Discs na PSA Discs
super nnukwu ịkpụ-apụ wiil
Non-kpara ngwa ngwa mgbanwe discs
ngwa mgbanwe mkpọchi
Efere abrasive mkpụrụ
1.Characters nke ca mere Solo-jel usoro
Ca mepụtara, Sol-jel usoro, bụ ụdị sintered abrasive mkpụrụ. N'ihi ya, ọ na-aha dị ka SG abrasive ọka. The crystal akụkụ bụ nnọọ obere, nke bụ naanị 100-500nm, na ọ bụ naanị obere onye-percent nke nkịtị corundum crystal size. A mpempe 46 # ọka nwere ọtụtụ ijeri crystal ahụ. Mgbe egwe, baa ụba omenala eletriki gwakọtara alumina ibu ewepụghị na deactive, na-adị mfe abịa anya n'ebe abrasive ngwaọrụ n'okpuru egweri ike. Ya ọrụ ndụ bụ mkpumkpu. Otú ọ dị, n'ihi na ca, ie SG abrasive mkpụrụ, dum yi usoro bụkwa ya onwe-jisie usoro. N'oge ya ọrụ ndụ, ọhụrụ nkọ egweri ihu ekpughe mgbe niile mgbe passivating ezi crystal mkpụrụ-abịa si egweri ngwaọrụ n'okpuru egweri ike, nke na-eme ka mkpụrụ mgbe niile na-egbusi ọnọdụ. Ya mere, abrasive ngwaọrụ mere site ca bụ nke ogologo ndụ gbalaga, ezi onwe-jisie ike, elu ọnwụ arụmọrụ, dị ka nke ọma ka ọ ghara ere ọkụ workpieces.
Ruru ya dị iche iche microstructure, Azu na-egosi ihe dị iche na abrasive mkpụrụ mgbaji ọkpụkpụ omume. Ca-egosi tinyere crystal mgbaji ọkpụkpụ mmebi, mgbe omenala eletriki gwakọtara alumina egosi transgranular mgbaji ọkpụkpụ mebiri. Ya mere, ike nke ca bụ ugboro abụọ karịa nke ndị nkịtị gwakọtara alumina.
Ca-emepụta site Solo-jel usoro nwere yiri chemical mejupụtara na ekweghị ekwe ka WFA (White gwakọtara alumina). Ruru ya edo obere microcrystalline Ọdịdị, elu ike na obere gbajiri arụmọrụ, Azu nwere ike ọtụtụ ebe e ji maka egweri nke siri ike na-usoro ihe dị ka ngwá ọrụ ígwè, siri ike anaghị agba nchara, okpomọkụ na-eguzogide alloy ígwè, wdg
2.Features nke abrasive ngwaọrụ mere site ca
(1) The zuruoke ka nnọọ nkọ, nke na-eme ka o nwere ike ọnwụ ike, elu-egweri arụmọrụ. Ọ ga-eji na nnukwu miri ọnwụ, roughing ndepụta, oké ọrụ na elu arụmọrụ egweri. Dị ka nnwale, otu usoro nri nwere ike iru 0.3mm ma ọ bụ karịa, metal mwepụ ọnụego bụ ihe karịa ugboro abụọ nke nkịtị corundum egweri wiil.
(2) Good ike, obere abrasion, ma na-egweri wiil na mma udi njigide. N'ihi na nkenke egweri na ụdị-egweri, elu akụkụ ziri ezi na size udi anọgidesi nwere ike mfe nwetara.
(3) High anwụ ngwa ngwa na ogologo ọrụ ndụ. Ọ nwere ike iru 5 to10 ugboro nke nkịtị corundum egweri wiil. Low nnọchi ugboro ike belata inyeaka nhazi oge na Downtime, nke-eme ka ọ eme ka ojiji nke space akara akpaka igwe, ifiọkde akpaka mmepụta.
(4) Good onwe-jisie arụmọrụ, bụghị karịrị akarị n'ụlọikpe. Ọ nwere ike na-otu ebe egweri arụmọrụ, belata mgbazi (naanị banyere 1/3 ndị nkịtị corundum egweri wheel) ma melite mmepụta arụmọrụ.
(5) Na-egweri arụmọrụ, ca egweri wiil dị nnọọ mma karịa nkịtị corundum egweri wiil. N'ihi na price, ca bụ nnọọ ala karịa CBN na diamond Abrasives, mgbe ya ekweghị ekwe bụ nke yiri nke nkịtị gwakọtara alumina, nke-eme ka ọ na-adịghị mkpa pụrụ iche egweri equipments na-agbazi ngwaọrụ. N'ihi ya, ọ dịghị ihe pụrụ iche a chọrọ maka egweri equipments na dịghị ịrụzi isi ike tụnyere CBN na diamond Abrasives. Ọ na-nwere dịghị pụrụ iche a chọrọ maka egweri ọmụmụ. Ya mere, ọ dị mfe na-agbasa na ojiji nke ya.
1.Chemical mejupụtara (Ahụkarị uru):
njupụta (g / cm3) Ball egweri ike Crystal Size
Previous: nkenke ọnwụ wiil
Blue Efere abrasive ọka
SG abrasive ọka
White Efere abrasive ọka
Brown gwakọtara alumina (A)
White gwakọtara alumina (Wa)
Adress: 18C Tianzhi ụlọ, NO.63 Beijing Rd., Qingdao Free Trade Mpaghara, Qingdao, China
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka anya.